Isixhobo seCryogenic Cylinder-Common Gases Equipment-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>Irhasi yeMizi-mveliso>Izixhobo zeegesi eziqhelekileyo
I-teknoloji: ukucoca okuphezulu okuphezulu
Isicelo: I-LOX, i-LIN, i-LAR, i-LCO2, ukugcinwa kwe-LNG kunye nokuhamba
Imigangatho: DOT-4L, EN1251, GB24159, ASME, kunye neminye imigangatho yamanye amazwe
Ukusebenza okuphezulu okuphezulu
Ubuncinci bokulahleka komphunga wemveliso
Ukugcinwa elula kunye nokuthuthwa
Iikhoyili zokwenza umphunga ngokwezifiso zibonelela ngokuhamba kweerhasi rhoqo
SinoCleansky Isilinda seCryogenic luhlobo lwesitshixo sokuhambisa ubushushu obuninzi obuninzi obunokususa isitya esinamanzi esinokusetyenziselwa ukugcina, ukuhambisa iimveliso zegesi ezinamanzi (i-oksijini engamanzi, i-argon engamanzi, i-nitrogen, i-carbon dioxide kunye ne-N2O).
Kwangelo xesha, umgangatho weesilinda unokuqinisekiswa ngokufanelekileyo ngeempawu zokhuseleko, ukuthembeka, ukusebenziseka lula, amandla aphezulu okutshaja igesi kunye nokukwazi ukugcwalisa kwakhona.
Imigangatho yokuvelisa: DOT-4L, EN1251, GB (umgangatho waseTshayina), njl.
Umthamo wamanzi: 175 L - 500L
Uxinzelelo Ukusebenza: 1.37Mpa, 2.02Mpa, 2.4Mpa, 2.84Mpa njl
Iindidi zohlobo (nkqo):
Inkcazo: CT160HP (175L-2.02Mpa)
Inkcazo: CT180HP (195L-2.02Mpa)
Inkcazo: CT200HP (205L-2.02Mpa)
Inkcazo: CT240HP (250L-2.02Mpa)
Zonke iisilinda ziya kupakishwa ngefilimu yeplastiki okanye ibhokisi okanye iibhokisi zomthi zokukhusela umphezulu. Kwaye iisilinda zinokuhanjiswa ngepallet, okanye ngokukhululekileyo kwisitya.
Iisilinda zihanjiswa ngengxelo yovavanyo lwefektri. Ingxelo yefektri ye-SinoCleansky ibonisa zonke iimvavanyo ezifunwa yi-GB24159 std, ezibandakanya: uvavanyo lokuqulunqwa kweekhemikhali, uhlolo lwe-radiographic, njl.
Kwiintlobo ezithandwayo ezinje nge-DPL450-175L / 195L / 210L i-dewar flasks, zihlala zithunyelwa ngesikhongozeli se-20ft, ubungakanani bokulayisha bujikeleze ii-50pcs.
Ngobungakanani beekhonteyina ezingama-20ft, ihlala ithatha iiveki ezi-4-6 ukugqiba imveliso. Kodwa ukuba kukho isitokhwe, ixesha lokuhambisa linokuba malunga neeveki ezi-2 ukuya kwezi-3.
Ngaba ikhona isakhelo kunye namavili akhoyo?
Ewe sinako ukubonelela ngesakhelo kunye namavili.